पहिलो निर्णय गर्नेहरूलाई सँगै आफ्नो आफ्नै पीसी राख्न, वा आंतरिक यसलाई बुझ्न, भ्रामक सर्तहरू धेरै संग सामना गर्न सुरु गर्नुहोस्। हामी कम्प्युटर आवरण खोल्न गर्दा हामी तार, प्लेट, प्रशंसक, गर्मी डूब, आदि धेरै हेर्न साथीहरूलाई सम्पर्क बुझ्न सजिलो गर्न एक पटक मास्टर फेरि र कारण जोगिन।
आज हामी GDDR5 यस्ता एक रोचक अवधारणा कुरा हुनेछ। छ, धेरै थाहा छैन, केही अन्य सचेत मान्छु र बुझ्न सक्छन्। पाठक भ्रममा छैन क्रममा, यो कि GDDR5 एकैचोटि भन्न आवश्यक छ - स्मृति छ। किन पर्छ र त्यो हो जहाँ हामी थप थाहा छौँ।
छैन सर्तहरू एक गुच्छा एक पटक नजान्ने व्यक्ति मा डम्प गर्न, यो राम्रो अर्कोतर्फ जाने छ। हामी सबै पीसी मामला मा राखिएको छ जो Motherboard बारेमा थाहा छ। प्रोसेसर, बिजुली आपूर्ति, भिडियो कार्ड, राम र अन्य तत्व जोडिएको गरिनेछ। त्यहाँ सिस्टम को एक स्मृति छ भन्ने तथ्यलाई अलग्गै पनि यस्तै अवधारणा र भिडियो कार्ड छ।
भिडियो स्मृति - त्यसैले शब्द छ। वास्तवमा, यो राम कि जस्तै हो, तर छवि स्क्रिनमा reproducing लागि आवश्यक छ कि जानकारी को भाग को भण्डारण लागि विशेष जिम्मेवार छ। सारा सिस्टम को स्मृति गर्न यसको विपरीत, यो लगभग भिडियोको लागि मात्र जिम्मेवार छ। तसर्थ, भिडियो स्मृति चिप्स ग्राफिक्स कार्ड राखिएका छन्।
विभिन्न राम आफ्नो परिचय पहिलो विभिन्नता संग आवश्यक छ सुरु गर्नुहोस्। "राम" को पुरानो फारम DDR को स्मृति हुन मानिन्छ। अब, सायद, यो असम्भव यस प्रकारको एक Motherboard फेला पार्न छ। अपरेटिङ भोल्टेज वोल्ट 2.5 थियो। निस्सन्देह, पहिले नै सबै प्रकार मा फिर्ता देख, हामी सुरक्षित DDR मेमोरी सबैभन्दा बिजुली खपत भनेर भन्न सकिन्छ।
हामी GDDR5 ग्राफिक्स कार्ड छ के सिक्न अघि, यो विविधता बुझ्न आवश्यक छ। सबै समय को लागि स्मृति को प्रकार, यो असंख्य थियो। तपाईं बिन्दु सीधा जानु पर्छ त प्रत्येक, अर्थमा बनाउन गर्दैन वर्णन।
सामान्य मा, एक स्मृति घूंट अनियमित पहुँच नाम पायो। यो पहिलो दोस्रो विश्व युद्ध को समयमा संसारको थाह भयो। तर यसको आधुनिक प्रकटीकरण मा 1966 मा देखियो। लामो समय विकासकर्ताहरूले र निर्माताहरु स्मृति सुधार गर्न खोजे। पहिलो प्रकार को एक पछिल्लो शताब्दीको प्रारम्भिक 90-एँ मा PM घूंट भयो।
तर विकासकर्ताहरूले सबै "राम" को गति र मात्रा वृद्धि गर्न समय भएको थियो। DDR SDRAM - छ प्रयासहरू पछि एउटा नयाँ प्रकारको बजार मा देखिन्छ। उहाँले अघिल्लो संस्करण फरक विस्तारित डाटा दर (दुई पटक) भयो। यस प्रकारको पहिलो ग्राफिक्स कार्ड स्थापित छ। समय, विकासकर्तालाई राम र Chipset प्रयोग गर्ने निर्णय गरे।
यो GDDR5 DDR SDRAM धन्यवाद देखा छ कि विश्वास छ। जो यस पाँचौं संस्करणमा अनुप्रयोगको लागि उत्पन्न गरिएको थियो। यी softs उच्च ब्यान्डविथ आवश्यक छ। यो विकल्प को पूर्ववर्ती चौथो-पुस्ता स्मृति भएको छ। दुवै DDR3 आधारित छन्। संचार च्यानल त्यहाँ 8 बिट को चौडाई Buffers, दुगुना भएको छ।
यो रोचक छ निर्माताहरु को धेरै मा काम को यस प्रकार छ। त्यसैले अनुसन्धान "सर्कल" Hynix, Qimonda, सैमसंग र JEDEC थिए। आश्चर्य तिनीहरूलाई र कम्पनी AMD काम भन्ने तथ्यलाई थियो। यो एक धेरै लामो समय लिए, र सुरु देखि यो तीन वर्ष लाग्यो समाप्त गर्न। यो समयमा विकासकर्तालाई उत्कृष्ट परिणाम हासिल गर्न सक्षम थिए।
त्यसपछि हामी यो छ र के को लागि के GDDR5 बारेमा धेरै कुरा सिक्न। तर सबैले यसको चश्मा अझै गठन गर्दै यस स्मृति प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बाटो चिप्स को शुरुवात 1.5 वी को एक कम भोल्टेज मा काम भएकोले र घनत्व 0.5-2 जीबी थियो। आफ्नो आवृत्ति 4000 मेगाहर्ट्ज पुग्छ, र 7000 मेगाहर्ट्ज यो आंकडा अप जुटाउने केही समय पछि व्यवस्थित।
उहाँले पहिले नै एक वर्ष पछि, 2009 मा 1 Gbit चिप को एक घनत्व देखा छ -2Gbps एक घनत्व। उत्तरार्द्ध विकल्प 50-एनएम प्रक्रिया प्रविधिले गठन गरिएको छ। 2015 को शुरुवात गरेर विकास उत्कृष्ट परिणाम गर्न नेतृत्व गरेको छ। चिप घनत्व 8 Gbps पुग्यो, र निर्माण प्रक्रिया 20 एनएम लागि कार्यरत थिए। यो रेकर्ड होल्डर कोरियाई कम्पनी सैमसंग को नेतृत्व अन्तर्गत आए।
हामी यो स्मृति आवश्यक किन यो छ कि, GDDR5 को बारेमा थप जान्न, यो अब सबै निर्माता द्वारा प्रयोग गरिन्छ जो आधारभूत विशेषताहरु, विचार गर्न महत्त्वपूर्ण छ। रूपमा पत्र को शीर्षक मा स्पष्ट भएको छ «जी» ग्राफिक्स को अवधारणा लागि जिम्मेवार छ। छ, स्मृति यस प्रकारको भिडियो कार्ड लागि आवश्यक छ।
GDDR5 मानकीकरण अन्तर्गत जारी गरिएको छ। 8n वास्तुकला को निर्देशन, प्रदर्शन सुधार गर्ने इन्टरफेस गतिशीलता कन्फिगरेसन, साथै प्रविधि संग अन्तर्गत। एक चिप 32 बिट एक चौडाई छ र शरीर 170 सम्पर्क भएको थियो। प्रक्रिया प्रविधि 40 एनएम छ।
फ्रिक्वेन्सी दुई प्यारामिटर द्वारा निर्धारण गर्न सकिँदैन। पहिलो मान 1250 मेगाहर्ट्ज देखाउँछ भने, दोस्रो 2500 मेगाहर्ट्ज बराबर अर्थात् दुई पटक धेरै हुनेछ। निर्माता अक्सर विभिन्न आवृत्तियों संकेत, तर स्थानान्तरण दर सधैं नै छ।
रुझान को मुख्य लाभ throughput सुधार भएको छ। भिडियो को तेस्रो पुस्ता गर्न यसको विपरीत, पाँचौं रन 128/256 को बस बिट चौडाई थियो। थुप्रै तरिकामा यसलाई केही संकेतक सुरक्षित मदत गरे। यसरी, टायर लागि 512 बिट GDDR3 प्रयोग। यो आंकडा वृद्धि चिप आकार, यसको प्याकेजिङ्ग र सम्पूर्ण मोडेल को यसरी लागत। खपत यस प्रकारको र ऊर्जा को एक ठूलो रकम भिडियो कार्ड।
अब हामी GDDR5 को ठेगाना, भिडियो स्मृति प्रमुख निर्माता को काम हो। अचम्मको कुरा छैन, भिडियो कार्ड को पहिलो मोडेल, 2008 मा देखा यसलाई देखि, AMD छ। त्यो अति भयो Radeon HD 4870. यो 512 एमबी र 1 जीबी को मात्रा भिन्नता जो दुई संस्करण मा प्रस्तुत गरिएको थियो।
त्यहाँ छ nvidia GeForce को मोडेल थिए। GDDR5 तुरुन्तै थिए :. GTX 550, को GTX 560, को GTX 580, को GTX 590, को GTX 660, को GTX 680, आदि साथै, स्मृति यस प्रकारको अब प्लेस्टेशन कन्सोल को चौथो संस्करणमा पाइएको बीच कार्डहरू एक श्रृंखला, मा प्रदर्शित हुनेछ। एकै समयमा यो त्यहाँ एक राम रूपमा राखिएको थियो।
सबै माथि सारांश, यो धेरै समय देखि देखा राम पारित गरेको छ भन्ने महसुस गर्न महत्त्वपूर्ण छ। भिडियो स्मृति विकसित र गठन गरेको छ। अब पाँचौं पुस्ता सबै भन्दा गति छैन। अपेक्षाकृत हालै अर्को प्रकार थाह - GDDR5X। उहाँले छिटो रूपमा दुई पटक हो। तैपनि, यो सबैभन्दा माग GDDR5 स्मृति भिडियो कार्ड को एक घटक रूपमा, तर पनि एउटा छुट्टै राम चिप्स रूपमा मात्र छैन।
अब मुख्य खतरा, बजार संग स्मृति यस प्रकारको को लापता योगदान हुन सक्छ जो स्मृति विकास र सुधार गर्न कहीं छ भन्ने छ। साथै, हालसम्म तिनीहरूले उच्च ऊर्जा खपत समस्या समाधान गर्न व्यवस्थित छैन। अघिल्लो संस्करण मान धेरै साना हुन्छन् तापनि अझै केही यसलाई समाधान गर्दैन। यसबाहेक, ओभरक्लकिङ तिर हाल प्रवृत्ति, उच्च शक्ति खपत जरुरी र supercedes समस्या दिइएको।
मुद्रक पाठ कसरी छाप्न? एक मुद्रकमा पाठ मुद्रण चरण निर्देशनहरूको द्वारा चरण
ZYXEL Keenetic सुरु: रूटर को कन्फिगरेसन। सेट अप ZYXEL Keenetic सुरु लागि निर्देशन
कसरी प्रयोग गरेर घर वाइफाइ राउटर बनाउने?
"Iberogast": analogues सस्तो र प्रभावकारी। "Iberogast" (मौखिक प्रशासन लागि खस्छ): निर्देश
संसारमा सबै भन्दा ठूलो जनावर: विवरण, वासस्थानमा र रोचक तथ्य
ईगल - ब्रियान्स्क: को शहर बीच रेल र बसें को तालिका
यो पत्ता लगाउन कति वर्ष गुलाब Syabitova सजिलो छ
Nikolai Nekrasov: "शोकगीत"। विश्लेषण विवरण निष्कर्ष
समारा मा आराम: मनोरञ्जन। "किश्ती" - मनोरञ्जन केन्द्र, सामारा
उच्च अम्लता संग ग्यास्ट्रिटिज मा आहार: बीमारी को समयमा के र कसरि गर्नुहोस
एक "यार" के हो? जहाँ शब्द भएको छ, र के अर्थ